I-SAR HA I-Smooth Forex Trading Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex I-SAR HA I-Smooth Forex Trading Isu
Ukuhweba akukhona ngenhlanhla noma ithuba. Akukona ukugembula, ngethemba lokuthola ukunqoba kukho konke ukuhweba. Ehlangothini le-flip, akukho okuqinisekile ekuhwebeni. Empeleni, noma yini engenzeka ekuhwebeni. Ngakho-ke, kusiholelaphi lokhu? Akukhona ngenhlanhla futhi nokho awusoze waqiniseka ekuhwebeni?
Well, ukuhweba kumayelana okungenzeka. Imayelana nokupakisha zonke izinkomba zendlela okuthrendayo. Imayelana nokubheka izikhombisi-ndlela ezivamile ezivela ku-thesis ehlukene ukuze ube namathuba aphezulu okuwina. Lezi zikhombisi-ndlela zingavela ezinkomba, isinyathelo intengo, amanani kanye namaphethini ezithi zamakhandlela nanoma yikuphi ukuhlaziya okunokwenzeka okuphezulu okunganikeza abadayisi izinkomba zokuthi intengo iya kuphi. Yilokhu abadayisi abakubiza ngokuthi yi-confluence.
Ngokwesibonelo, inkomba eyodwa ingaba nomphetho omncane nge-a nje 55% amathuba okukhomba indlela efanele. Bese, enye inkomba inganikeza enye 55% amathuba. Ngamunye, lezi zinkomba zingase zingabi umphetho omkhulu. Kungase kufane nokuphequlula uhlamvu lwemali. Noma kunjalo, uma umhwebi enquma ukuthatha lezi zimpawu zezinkomba kuphela lapho ehlangana futhi ehlinzeka ngezimpawu zokuhweba cishe ngesikhathi esifanayo., amathuba angaba ngcono. Yini eyake yaba a 55% Amathuba manje angaba a 60% amathuba noma ngaphezulu. Noma yimuphi umhwebi angakujabulela ukuthatha lokho onqenqemeni. Yilokho okwenziwa yi-confluence.
I-SAR Smooth Trend Forex Trading Strategy iyisu elisebenzisa amathuba aphezulu okuthambekela okulandela izinkomba.. Leli su livumela abathengisi ukuthi bathathe uhwebo olunethuba eliphezulu kakhulu lokukhiqiza inzuzo ngokuqinisekisa ukuthi abathengisi bahweba ngokuhlangana kokuhlehla kwethrendi kanye nomfutho..
I-Parabolic Stop bese Uhlehla
1 I-Parabolic Stop bese Uhlehla
4.3 Ungalifaka kanjani i-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy?
I-Parabolic SAR, eyaziwa nangokuthi Parabolic Stop and Reverse, kuyinkomba elandelayo esetshenziswa kakhulu abadayisi abaningi.
Le nkomba isetshenziswa kakhulu abahwebi ukucacisa izitayela kanye nomfutho wempahla yokuhweba. Lokhu ikwenza ngokuhlela amachashazi eshadini lentengo. Amachashazi abekwe ngaphansi kwesenzo sentengo ayinkomba yethrendi ye-bullish, kuyilapho intengo ebekwe ngaphezu kwesenzo sentengo ibonisa ukuthambekela kwe-bearish.
Umsebenzi wesibili we-Parabolic SAR ukusiza abahwebi ukukhomba izindawo ezifanelekile zokulahleka kokumiswa. Amachashazi afanayo amaphuzu enza ize ithrendi ekhona. Okwazekayo, uma intengo yephula amachashazi, khona-ke ukuthambekela kubhekwa njengokuhlehlile noma kuphelile. Lokhu kwenza kube indawo ekahle yokulahlekelwa kokuma.
I-Parabolic SAR ithatha ngokuthi umhwebi uhlale etshaliwe emakethe, ngakho-ke igama elithi "Yima futhi Uhlehlise". Abahwebi bavele bangene emakethe baye kolunye uhlangothi njengoba imakethe ihlehla. Lokhu kuzwakala kukuhle ngombono. Noma kunjalo, ayisebenzi njalo. Lokhu kuzosebenza kahle ezimakethe ezithrendayo, kodwa ingadala ukulahlekelwa okukhulu uma isetshenziswa emakethe eguquguqukayo. Umthuthukisi wenkomba ucebisa ukusebenzisa le nkomba ngokuhlangana nezinye izinkomba ezisiza ukukhomba indlela yethrendi. Ingase futhi izuze kumaphethini ekhandlela angabonisa ukuhlehla kwethrendi.
I-Heiken Ashi Smoothed iwumkhuba olandela inkomba yobuchwepheshe okuwuhlobo oluhlukile lwe-Heiken Ashi Candlesticks.
I-Heiken Ashi ngokuyisisekelo isho amabha amaphakathi. Ngendlela, amakhandlela e-Heiken Ashi ayeyibha emaphakathi. Lawa amakhandlela abonisa ukuphakama nokuphansi kwekhandlela futhi ashintsha umbala kuphela uma inani elimaphakathi lamabha omlando libonise ushintsho ekuqondeni..
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed ngakolunye uhlangothi ayisekelwe kuzinti zamakhandlela ezijwayelekile. Kunalokho, isuselwe ku-Exponential Moving Average (UMAMA). Lokhu kudala imigoqo ehamba kahle njengoba nje umugqa we-EMA ubungenza.
Inkomba ye-Heiken Ashi Smoothed iyinkomba ethembeke kakhulu elandelayo. Ivamise ukuhlehla kuphela uma imakethe inamathuba aphezulu kakhulu okuhlehla.
Leli su lihlinzeka ngezimpawu zokuhlehla kwethrendi kusetshenziswa ukuhlangana kwezinkomba ze-Heiken Ashi Smoothed kanye ne-Parabolic SAR.
Ku-Parabolic SAR, isignali izomane ibe wukushintsha kwamachashazi abonisa ushintsho lwendlela yethrendi.
Izimpawu zenkomba ye-Heiken Ashi Smoothed zizosekelwe ekushintsheni kombala wamabha..
Akuwona wonke amasiginali angabangela ukuhlehla. Esikufunayo amasignali aqondaniswe eduze njengoba lokhu kuvame ukwenzeka kuphela uma kunomfutho oqinile ngemuva kwesiginali yokuhlehla.. Sizophinde sibheke amakhandlela ashukumisayo aseduze namasiginali ahlehlayo noma amasiginali okubuyisela emuva aqondaniswe ngqo nekhandlela lomfutho..
I-Parabolic SAR (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Heiken Ashi Smoothed (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Amachashazi e-Parabolic SAR kufanele asuke ngaphansi kwamakhandlela entengo.
Amabha e-Heiken Ashi Smoothed kufanele ashintshe abe luhlaza okwesibhakabhaka.
Ikhandlela le-bullish kufanele libe eduze kwekhandlela lokungena noma ikhandlela lokungena kufanele libe yikhandlela le-bullish..
Setha ukulahleka kokumiswa ngaphansi kwamabha e-Heiken Ashi Smoothed.
Ngokushesha nje lapho intengo iqhubekela phambili ekuhwebeni, hambisa ukulahleka kokuma ngezansi kwemishayo ye-Heiken Ashi Smoothed imigoqo emithathu ngemuva kwekhandlela lamanje kuze kube yilapho ukuhweba kunqanyulwa..
Amachashazi e-Parabolic SAR kufanele asuke ngaphezu kwamakhandlela entengo.
Amabha e-Heiken Ashi Smoothed kufanele ashintshe abe bomvu.
Ikhandlela lomfutho we-bearish kufanele libe eduze nekhandlela lokungena noma ikhandlela lokungena kufanele libe yikhandlela le-bearish.
Setha ukulahleka kokumisa ngaphezu kwamabha e-Heiken Ashi Smoothed.
Ngokushesha nje lapho intengo iqhubekela phambili ekuhwebeni, hambisa ukulahlekelwa kokuma ngenhla kwamabha e-Heiken Ashi Smoothed imigoqo emithathu ngemuva kwekhandlela lamanje kuze kube yilapho ukuhweba kunqanyulwa..
Ukuhweba ngomkhuba usebenzisa lezi zinhlobo zezinkomba kusebenza kahle kakhulu phakathi nezimo zemakethe ezihamba phambili. Iphinde ivumele abadayisi ukuthi bathwebule yonke inkambiso kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Lokhu kunikeza abathengisi ukusethwa kohwebo olunesivuno esikhulu.
Noma kunjalo, abahwebi kufanele bagweme ukusebenzisa leli su noma nini lapho imakethe isesimweni esibi. Kungcono futhi ukusebenzisa leli su ngokuhlehla kwethrendi okuvela kumaphuzu abalulekile, njengeleveli yokwesekwa yangaphambilini noma yokumelana.
I-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy iyinhlanganisela ye-Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
SAR HA Smooth Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini amanani dynamics ezingabonakali ngeso lenyama..
Ungalifaka kanjani i-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy?
Landa i-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy.zip
Hamba kwesokudla ukuze ukhethe i-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy
Uzobona I-SAR HA Smooth Forex Trading Strategy iyatholakala eshadini lakho
Isiqephu esedluleIzinkunzi Zithwala Amehlo EA MT5 Indicator
Isihloko esilandelayoI-Puria Method MT5 Inkomba